Purakhabar News, Author at PuraKhabar - Page3of 1333
एनआइसी बैंकले गर्यो सिद्धबाबा मन्दिरको सरसफाई
बुटवल, १ असार । एनआइसी एसिया बैंक प्रदेश ५ ले शनिबार प्रभातफेरी तथा सिद्धबाबा मन्दिरमा सरसफाई गरेको छ । सामाजिक उत्तारदायित्व अन्तर्गत बैंकले विहान बुटवल हस्पिटल लाईर्नदेखि सिद्धबाबा मन्दिरसम्म बैंकिङ साक्षरता प्रभातफेरी तथा सिद्धबाबा मन्दिर परिसरमा सरसफाई गरेको हो । १ सय २० जना बैंकका कर्मचारीहरु बैंकिङ साक्षरता लेखिएका प्लेकार्ड ब्यानर सहित वुटवल सिद्धबाबा मन्दिरमा पुगेका थिए । बैंकले सिद्धबाबा मन्दिर परिसर सरसफाई गर्दै मन्दिरलाई डस्टविन र कुर्ची समेत प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा सिद्धबाबा मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई बैंकका प्रदेश ५ का प्रमुख तिलक सुन्दर कार्कीले १० थान कुर्ची…
१ असार, काठमाडौं । बेरोजगारी घटाउने भनेर यस वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका थरीथरीका झाँकी देशभरका स्थानीय तहमा देखिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा यो कार्यक्रमको ‘रिहर्सल’ गरेको छ । स्थलगत अवलोकनका क्रममा हामी आइतबार वडा नम्बर ५ स्थित गहनापोखरी पुग्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विद्रूप दृश्य देखियो । बेरोजगारी हटाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र यसबाट कुन वर्ग लाभान्वित भइरहेको छ भन्ने प्रष्टै देखियो । गहनापोखरी नजिकै अलिकति खाली ठाउँ थियो । त्यहाँ १२ जना महिला र एक पुरुष उभिएका…
१ असार, बुटवल । प्रदेश नं. ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेका छन । कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अथार्त ३६।९४ प्रतिशत र पुँजिगत तर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अथार्त ५१।०१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानिय तहलाई उपलब्ध गराईने सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख, वित्तिय समानिकरण…
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेर गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विरोध सभा’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्मा पेश गरिएको गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘गुठी विधेयक नेपालको संस्कृति र सभ्यतामाथिको प्रहार गर्ने किसिमले आएको छ, यो काङ्ग्रेसलाई मान्य हुँदैन’, उनले भने । सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श नगरी गलत मनसायबाट गुठी विधेयक आएको उनको भनाइ छ । उनले गुठी अधिकार सुरक्षित गर्न काङ्ग्रेसले सदन र सडकमा आन्दोलन गर्ने स्पष्ट पारे । नेता सिंहले वर्तमान सरकारले गुठी…
फिल्म प्रेम गीत ३ निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । फिल्मका लागि नायिका छान्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने नायकहरु वर्कसपमा लागि सकेका छन् । घोडसवारी लगायतको बिषयमा ज्ञान लिन पर्ने भएकाले फिल्मका लागि फाइनल भएका कलाकार आफुलाई क्यारेक्टरका लागि तयार पार्न लागि परेका छन् । अहिले सम्म फिल्मका लागि ५ जना पुरुष कलाकार फाइनल भैसकेका छन् भने अन्य २ जनाको बारेमा समेत चर्चा भै रहेको छ । सन्तोष सेन फिल्ममा एन्टागोनिस्टको भूमिकामा रहेका छन् फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेन । फिल्मका लागि नायिका छान्ने कामका साथसाथै उनी वर्कसपमा समेत सहभागी…
काठमाडौँ । नेपालस्थित भारतीय दुतावासले पाँचौ योग दिवस मनाएको छ । सबैभन्दा उच्चाइमा रहेको सगरमाथाको प्रवेशद्धारमा रहेको नाम्चे बजारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि योग दिवस मनाएको हो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभ सिंह पुरीको प्रमुख आतिथ्यमा आइतवार भएको सो कार्यक्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाकका युवा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सगरमाथा राष्ट्रिय उद्यानका पदाधिकारी तथा विदेशी पर्यटकको सहभागीता रहेको दुतावासले जनाएको छ । दैनिक जीवनमा योगको महत्वको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । विश्वको सबभन्दा उचाईमा रहेको सगरमाथाको प्रवेशद्धारामा पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रमको आयोजना भएको दुतावासले जनाएको छ ।
महोत्तरीकाे भूमिगत पानी रित्तिँदै
जलेश्वर / महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरको वडानं. २ मा डेरा लिएर बस्दै आउनुभएका नविनकुमार नवललाई नुहाउन अहिले समस्या भएको छ । जलेश्वरमा अहिले दैनिक ३८ डिग्रीदेखि ४२ डिग्रीसम्म गर्मी बढदै गएपनि नवलले मज्जाले नुहाउन सक्नुभएको छैन् । डेरामा रहेको चापाकल बिहानैदेखि सुक्न थालेका कारणले आधा बाल्टिन नुहाउनु परेको गुनासो गर्नुहुदै उहाँले भन्नुभयो,‘पानीको यस्तो समस्या भएको छ कि आधा बाल्टिन पानी भर्न पनि आधा घण्टा लाग्छ ।’ यसक्षेत्रमा भुमिगत पानीको सतह घटदै गएको कारणले अहिले चापाकल बन्द हुने समस्या धेरैको छ । चुरे विनासको कारणले यसक्षेत्रमा पानीको सतह घटदै गएको हो…
जन्म दिन मनाउने फरक शैली यी युवाको
बुटवल । सामाजिक काममा अग्रसर युवा केशव खनालले आफनो जन्मदिन आईतबार आम्दा महिला तथा बाल अस्पतालका बिरामीहरुलाई भेटेर नगदी खाम वितरण गरेर मनाएका छन । अस्पतालमा उपचारमा रहेका विरामीलाई फलफुलभन्दा नगदको खाचो हुने तर्क गर्दै उनले खाम अभियानको सार्थकता प्रष्टयाए । कार्यक्रममा आम्दा अस्पतालका डा केशव प्रसाद शर्माले नमुना काम भएको बताए । यो सचेतनाका कार्यक्रम भएकाले पनि यसबाट धेरै समुहमा अभियान जाने उनले आशा ब्यक्त गरे । जिल्लामा धेरै संघसंस्थाहरुले फलफुल वितरण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको भन्दै यसको विकल्पमा खाम अभियान धेरै प्रभावकारी रहेको उनले बताए । खाम अभियान…
नेपाली राजनितीमा हट केक विषय बनिरहेको कुरा हो तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र विच पार्टी एकता हुँदा केपी ओली र प्रचण्ड विच भएको गोप्य सहमतीको खुलासा । गोप्य भनेको सहमती बाहिर आए पछि नेपालमा राम्रै तरंग भयो । नेपाली मिडियाले उक्त बिषयलाई निकै हट केक बिषयको रुपमा चर्चामा ल्याए । देशमा ठुलै तरंग ल्याएको विषय ओली र प्रचण्ड दुवैले भने यो कुनै नौलो बिषय नभएको तर अनावश्यक रुपमा उचाल्न खोजिएको बताएका छन् । खासमा यो विषय आउँनुको मुख्य चुरो के हो त ? प्रचण्ड ओलीले गरेको भनिएको गोप्य सहमती पहिलेनै…
रुपन्देहीमा हिजो ५ वर्ष यताकै उच्च गर्मि
बुटवल । रुपन्देहीमा आज ५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको छ । जलतथा मौसम विज्ञान विभाग हावापानी फिल्ड कार्यालय भैरहवाका अनुसार आज दिउसो भैरहवाको उच्च तापक्रम ४३ दशमल ३ डिग्री सेल्सीयस मापन भएको छ । हिजो भैरहवामा ४२ दशमल १ डिग्री सेल्सीयस तापक्रम मापन भएको थियो । भैरहवामा गतवर्ष २०१८ मा ४० डिग्री सेल्सीयस तापक्रम रहेको थियो । त्यस्तै २०१७ मा ४१ दशमलव ९डिग्री सेल्सीयस तापक्रम रहेको थियो । त्यस्तै २०१६ मा भने ४३ दशमलव २ डिग्री सेल्सीयस तापक्रम मापन भएको थियो । रुपन्देहीमा आज मापन भएको तापक्रम देशकै सबैभन्दा…